काठमाडौ - मकवानपुरको पर्यटकीय गन्तव्य चित्लाङ हरेक सम्भावनाले भरिपूर्ण छ । यो भेग कृषि, पशुपालन र पर्यटकिय दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ । राजधानी काठमाडौंबाट करिव ६० किमीको पश्चिम दक्षिण दिशामा अवस्थित चित्लाङका बारेमा धेरैलाई थाहा हुन सक्छ । तर त्यही चित्लाङमा यस्तो अनौठो जनावर पनि पालिएको छ , त्यसको बारेमा.....
काठमाडौं -कृषि विकास बैक लिमिटेडले विभिन्न पदमा ३८४ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ कर्मचारी दरबन्दीमा रिक्त रहेको विभिन्न तहमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरेको हो । विराटनगरका लागि ६७ लेखापाल, भैरहवाकेन्द्रका लागि १ सय लेखापाल र सुर्खेत केन्द्रका लागि ४२ लेखापालको.....
सरकारले असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । आइतबार सरकारी स्तरबाट बर्दियामा कार्यक्रम गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भने रोपाई गर्न गृहजिल्ला गोरखा पुगेका छन् । उनले आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा रोपाई कार्यक्रममा सहभागी भएर १५ असार मनाए । पालुङटार नगरपालिका १ र सफल.....
विषादी प्रयोग गरी पकाइएको भारतिय आँप बजारमा, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक ! सिरहा – आँपको राजधानी मानिने सिरहामा अहिले भारतको विभिन्न स्थानबाट स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक मानिने कार्बाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण भइरहेको छ । स्थानीय किसानको बगैँचामा फलेको आँप असारको दोस्रो सातापछि.....
काठमाडौं - चिया किसान तथा चिया व्यवासायीहरूको कोटामा कृषि विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल शनिबार दिउँसो चीन जाँदै छन्। मन्त्री खनाल २० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन जान लागेका हुन्। चीनको सिचुवान प्रान्तको इविनी नगरपालिकामा मार्च १७ देखि २१ सम्म हुने ‘फर्ड अनुअल टी एक्सपो’ कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्रीसहितको.....
काठमाण्डौ - जमिन बाँझो राख्नेलाई अबदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जमिन बाँझो राखे कसुर गरेको मानिने र उसलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गराइने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले भू-उपयोगको.....
सिताके च्याउ एकदमै लोकप्रिय च्याउ हो । यो च्याउ अन्य च्याउहरु भन्दा फरक भएको कारणले गर्दा म‌ंहगो पनि छ । यसको लोकप्रियता बढ्दो मात्रामा रहेको पाईन्छ । यो लोकप्रिय र सर्वप्रिय हुनाको कारण यसमा भएको मासुजस्तो स्वाद नै प्रमुख कारण हो । देशका मुख्य शहरहरुका ठुला ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा यो च्याउ उपलब्ध.....
सुनसरी-कोशी गाउँपालिकामा भैंसी सुन्दरी प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । माघ १४ गते भएको प्रतियोगितामा बिजेतालाई भैंसी उपहार प्रदान गरिएको छ । प्रतियोगितामा ९० वटा भैंसी सहाभागी थिए जसमध्ये विन्देश्वर इशरको भैंसी उत्कृष्ट सुन्दरी बन्यो । उनले प्रथम पुरस्कार वापत लैनो भैंसी प्राप्त गरे । प्रतियोगिता.....
एक गुच्छा अंगूरको मूल्य ८ हजार २ सय अमेरिकन डलर
सामान्यतया अंगूरको मूल्य सुन्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर जापानमा पाइने एक गुच्छा अंगूरको मूल्य सुन्दा अचम्म लाग्छ नै।यसको मूल्य ८ हजार २ सय अमेरिकन डलर अर्थात् ८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। अंगूरको एकदानाको नै ३१५ अमेरिकन डलर आर्थात् ३१ हजार ५ सय पर्छ। यसले सबैभन्दा महंगो अंगूर भनेर.....
गोरखा- गण्डकी प्रदेशका जनताले बिदेशी स्याउ खान नपाउने भएका छन । गण्डकी प्रदेशमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बिदेशी स्याउ भित्रन नदिने बताएका छन । केयर नेपालले गोरखाको छोप्राकमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन । साथै उनले मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा लगायतका जिल्लामा.....